मर्दको छोरा ! – Rapti Khabar
‘छोरा जन्मिए आकाश, छोरी भए तारा ल,’ गणेशले निर्मलाको कपासजस्तै पेट सुम्सुम्याउँदै भन्यो।
‘ह्या बुढा, अलि नयाँ नाम पो राख्नु त। बाआमाको नाम मिलाएर राखौं न बरू,’ निर्मलाले फकाउन खोजी।
‘गणेश र निर्मलालाई जोडेर के हुन्छ? कि गमला राख्छ्यौ त छोरीको नाम?,’ गणेश मरीमरी हाँस्न थाल्यो।
निर्मलाले अनुहार ठुस्स पारी। रिसले बुढाको कुममा धक्का दिँदै भनी, ‘लु लु नहाँस। तिमीले भन्या नाम चाहिँ किन ठीक हुन्छ भन न त।’
प्रवचन दिन लागेजसरी गणेश बोल्यो, ‘सुन मायालु, छोरा भए आकाशजस्तै दृढ हुन्छ। हट्टाकट्टा बलियो। छोरी भए ताराजस्तै उज्याली हुन्छे। नाच्छे। चम्किन्छे। छोरा भए आकाशजस्तै गम्भीर होस्, छोरी भए ताराजस्तै चञ्चल होस्। अर्थ हेरी पो नाम राख्छन् त लाटी।’
यति थाहा भएपछि पन्ध्र वटा पूर्णिमा त थाहै नपाई बितिहाले। त्यसपछि लगत्तैको पहिलो औंसीमा गणेश र निर्मलाको संसार झिलीमिली भयो। राती ११ बजेतिर पालैपालो पाँच मिनेट अन्तरमा निर्मलाको गर्भबाट आकाश र तारा धरतीमा उत्रिए।
एकदिन सुत्नुअघि निर्मलाले गणेशलाई हाँस्दै सुनाई, ‘थाहा छ, तपाईंको छोराले अस्ति मेरो सलको सारी लगाएर ‘म कस्तो देखिएँ ममी’ भन्दै थियो। म त झन्डै लडिनँ हाँसेर। अझ हिजो त झन् ‘दाइले मेरो झुम्का चोर्‍यो’ भन्दै तारा रून आएकी मसँग। कति चकचके भएको छ त्यो केटो।’
‘कतै छोरा पनि ताराजस्तै त बन्न थालेन!’ उसलाई एकाएक डरले खान थाल्यो। अलिबेर केही नबोलेपछि गणेशले हिच्किचाउँदै निर्मलालाई डर बाँड्यो।
निर्मलाले अचम्म पर्दै भनी, ‘हरे! केटाकेटी छ, नक्कल मात्रै पारेको हो बुढा। मनको बाघले खान्छ यो मान्छेलाई। धेरै नसोच। मैले छोरा नै पाको हो ओइ।’
‘छोरा मान्छेले झुम्का, सारी लाउन खोज्ने हैन नि! बाबाले लगाकोजस्तो टि-सर्ट, प्यान्ट लाउनुपर्छ है बाबु,’ गणेशले याद गरेरै सिकाउन थाल्यो। अलिकति डर देखाउन ‘अबदेखि बैनीको कपडा लगाको देखेँ भने, हात खुट्टा बाँधिदिन्छु’ भनेर गाली पनि गर्‍यो।
आकाश र तारा दस वर्ष पुगेकाले भव्य उत्सव थियो। केक काट्ने बेला गणेशले भन्यो, ‘मेरी छोरी कति राम्रो नाच्छे नि, नाचेर देखाऊ त सानी!’
गणेशले ‘उठ न’ भनेर तान्दै थियो, ताराले हात झट्कारेर भनी, ‘मलाई आउँदैन के, बरू दाइलाई भन्नु नि। यो केटो कोठामा एक्लै-एक्लै कति नाच्छ।’
आँखामा गाजल लाऊँ कि, ओठमा लाली लाऊँ …
गीतको बीचमै हड्बडाउँदै गणेशले भन्यो, ‘ल ल आकाश, भयो अब। सबैजना खाना खान जाऊँ न बरू।’
आकाशलाई सोध्न मन थियो, ‘नाच्दानाच्दै रोकिनु त मलाई पो परेको हो, रिस त मलाई उठ्नु पर्ने। उल्टै मैले किन झापड खानुपर्‍यो?’ तर ऊ केही बोल्नुअघि नै गणेशले अर्को झापड लगायो।
भन्यो, ‘तँ सालेलाई केटा भएपछि कस्तो हुने सिकाइनँ मैले? त्यस्तै नाच्छस्? हिजडा बन्ने होस्?’
निर्मलाले ‘के बोलेको छोरालाई त्यस्तो?’ भनेर तान्दै थिई, गणेशले उसलाई नै हुत्याइदियो।
एक्लै बर्बराउन थाल्यो, ‘मलाई त उहिल्यै हो चालामाला ठीक नलाको। काँ संस्कार बिग्रियो नि भगवान्! म त मर्द नै हुँ त। मेरो छोरो हैन कि क्या हो यो!’
फेरि चिच्याएर आकाशतिर हेर्दै भन्यो, ‘अबदेखि सबको अगाडि यस्तै गरिस् भने यो घरमा नबसे हुन्छ। बुझिस्?’
त्यो रात आकाशलाई बासँग धेरैथोक भन्नु थियो। तर त्यति सब भएपछि बाको अगाडि उसको फेरि कहिल्यै बोली फुटेन। आकाशको लागि वरपर बा हुनु भनेको उसको टिभी रिमोटको ‘म्युट बटन’ चालु हुनु जस्तै भयो। ‘भोल्युम’ तब मात्रै बढ्थ्यो, जब कहिलेकाहीँ बा गाउँ जान्थे।
निर्मला गणेशजति कडा त थिइन, तर उभित्र पनि गणेशकै डर थियो। उसलाई पनि छोरा कसरी खुसी हुन्छभन्दा बढी, छोरा कसरी छोराजस्तै हुन्छ भन्ने चिन्ताले खाइरहन्थ्यो। ऊ पूजा गरेर आकाशलाई टीका लाइदिँदा पनि ‘छोरा, मन नडुला, बुद्धि नबिगार है, घरको इज्जत सोचेस्’ भन्दै आशीर्वाद दिन्थी।
एक ठाउँ मात्रै थियो जहाँ आकाश आफूलाई मनलागे जसरी फराकिलो हुन पाउँथ्यो- तारा। ताराको अगाडि आकाशको टिभी ‘फूल भोल्युम’ चल्थ्यो। तारा पनि दाइ नाचेको देख्दा मज्जा मान्थी।
अझ ‘म पनि यस्तै नाच्न सके’ भन्ने सोचिरहन्थी।
तारालाई पनि अलिअलि अचम्म नलागेको त होइन। एकदिन दाइलाई सोधेकी पनि थिई, ‘तँ ढोका लगाएर बाआमाले नगर् भनेको काम किन गर्छस्?’
आकाशले भन्यो, ‘मलाई खुसी लाग्छ। तँ ममीको मोबाइलमा किन गेम खेल्छेस्? कविता किन लेख्छेस्? त्यस्तै हो।’
ताराले फेरि सोधी, ‘अनि केटा भएर केटाजस्तो मात्रै गर्नुपर्छ रे त। तँलाई केटी हुन मन लागेको?’
आकाशले भन्यो, ‘तेरो साथी स्मृतीले किन ब्वाइज कट कपाल काटेकी? उसलाई केटा हुन मन लागेको हो?’
फेरि सोधी, ‘अनि मेकअप गर्छन् त केटाले? मेरो कपडा चाहिँ किन लगाउँछस्?’
आकाशले झिँजो मानिसकेको थियो, तर पनि उत्तर दियो, ‘म घुम्न जाँदा, स्कुल जाँदा, घर बस्दा त बाले भनेजस्तै कपडा लाउँछु त। फिल्ममा हिरोइनहरू नाचेको देखेपछि, म पनि त यस्तो सक्छु नि जस्तो लाग्छ। अनि हिरोइनजस्तो नाचेपछि कपडा पनि हिरोइनजस्तै लाउनु परेन?’
‘ल सकियो तेरो कौन बनेगा करोडपति। धेर नसोध्,’ भन्दै आकाश उठ्न लागेको थियो।
तारा फेरि बोली, ‘अनि तँ कोठामा चुकुल लाएर नाचेको मैले बालाई भन्दिन्छु भनेर डराउन्नस्?’
आकाशले एकछिन सोचेर भन्यो, ‘डराउन्नँ। तैंले मलाई पिटाइ ख्वाउँदिनस्।’
आकाशले सम्झियो- दस वर्ष हुँदा उसले झापड खाएको रात तारा ऊभन्दा बढी रोएकी थिई रे। हुन त आमाले त्यो कुरा ‘अबदेखि त्यस्तो बैनी रूनुपर्ने काम नगर्नू’ भनेर सुनाउनुभएको थियो। तर आकाशले त्यति सुनेपछि तारामा भर भेट्यो।
आकाशलाई कहिलेकाहीँ कुनै राम्रो ‘डान्स स्टेप’ सिकेका दिन बाआमालाई देखाउन खुब मन लाग्थ्यो।
सोच्थ्यो पनि, ‘बाबाममी ताराले लेखेको कविता त कति मन गरेर सुन्नुहुन्छ। उसकोजस्तै मेरो पनि ट्यालेन्ट त हो!’
सधैं बन्द कोठामा मात्रै खुला सास लिँदा विस्तारै आकाश निसास्सिएजस्तो हुन थालेको थियो। आकाशलाई लाग्थ्यो, ‘सबजना आफ्नो प्रतिभा देखाएर वाहवाही पाउँछन् भने म चाहिँ किन लुकाएर बस्नुपर्ने!’
ऊ एक्लैएक्लै चिढिन थाल्यो। केही दिन त मनमनै चिढिएर बसेको थियो। सहनै नसकेपछि एकदिन तारालाई आफ्नो मन बिसाउँदै सोध्यो, ‘कसैले नदेखे त केही जानेको पनि के अर्थ भयो र है? मलाई अब कि सबैले देख्नेगरी नाच्न मन छ कि नाच्नै मन छैन।’
तारासँग बोल्नलाई केही थिएन। उसलाई दाइ नाचिरहोस् भन्ने लाग्थ्यो। थाहा पनि थियो, उसले दाइलाई साँच्चै खुसी देख्नु भनेको दाइ नाचेको देख्नु हो। तर बासँग दाइको नाचबारे कुरा गर्न ताराको पनि कहिल्यै हिम्मत जुटेन। त्यही एउटा कुरामा उसलाई बा ‘हिटलर’ जस्तै डरलाग्दा लाग्थ्यो। अनि बाले नमानी आकाश कुनै हालतमा नाच्न पाउनेवाला थिएन। ताराले घोसेमुन्टो लगाई।
‘हेर् न यो केटीको डान्स कति खत्रा!’ भन्दै स्मृतीले म्यासेजमा टिकटक पठाएकी रहेछ। भिडि‌ओमा एउटी केटी दौरा-सुरूवाल, नक्कली जुँगा लगाएर दुरुस्तै केटाजसरी नाच्दै थिई-
कालो टोपी भादगाउँले मेरो शिरैमा ढल्केको…
म हुँ नेपाली बाबु, मेड इन नेपाल…
आकाशले मन नगरेको देखेपछि भनी, ‘तँलाई गाली गर्ने बाबा हैन? अब बाबाबाहेक सबले देख्छन् मेरो दाइको ट्यालेन्ट। खुरुक्क कपडा लगाएर आइज। बरू टाउकोमा मेरो दोपट्टाले मुरेटो बान् है!’
उसले सोची, ‘अब त दाइलाई धेरैले देख्छन्। त्यो जुँगा लाएर नाच्ने केटीजस्तै दाइको नाचको पनि तारिफ गर्छन्। सबले तारिफ गरेको कुरा मिलाएर भनेपछि बाबाले पनि मान्नुहुन्छ होला! दाइ नाचिरहन्छ, सधैं यस्तै खुसी हुन्छ।’
‘हुर्केको छोरालाई किन पिटेको,’ निर्मला कराउँदै थिई। गणेशले गोजीबाट फोन निकालेर देखायो। त्यसपछि निर्मलाले बुढालाई रोक्न सकिन। टाउको समातेर थचक्क बसी।
उसैले आएर गणेशलाई भिडिओ देखाउँदै भनेको रहेछ, ‘हैन, आजकालका केटा कस्ता हुन थाले है सर? केटा हो कि छक्का हो। बाआमाले पनि के सिकाउँछन् यस्तालाई। हुन त यस्ताको बाउ पनि के, छक्का नै त होला!’
गणेश बोलिरहेकै थियो, ‘अब मैले को-कोले के-के भनेको सुन्नपर्ने हो। यो कुलंघार बरू नजन्मिएकै भए हुने। कुन दिन छिमेकीले थाहा पाउँछन् अनि गाउँटोलमा पनि बसिसक्नु हुँदैन।’
निर्मला दलिन हेर्दै भन्न थाली, ‘अब त सुध्रियो भनेको बेला, फेरि किन यस्तो बेइज्जत गर्छस् छोरा? बरू मार्दे हामीलाई।’
‘तारा, म थाकेँ। हिजो जे भयो, त्यो तैंले गर्दा भएको हैन। त्यसैले आफूलाई दोष नदिनू। यो हिजोको मात्रै कुरा पनि होइन तारा। तँलाई हामी दस वर्ष हुँदाको बर्थ-डे याद छ? मैले त्यही बेला बुझ्नुपर्थ्यो, म यहाँ ठीक छैन। आज बुझेँ। बुझेर कहाँ पुग्छु थाहा छैन। तर अब म यहाँ चाहिँ बस्नु हुन्न।
राम्रा कविता लेख्नू। ज्ञानी छोरी हुनू। छोरीजस्तै हुनू ल।’
ताराको हातबाट चिठी खस्यो। हतारहतार टिपेर दौडिँदै आमालाई देखाउन गई। निर्मलाको सातो उड्यो। आमाछोरी आत्तिएर गणेशलाई फोन गरे। एकछिनमै ‘आकाश हरायो’ भनेर सबतिर हल्लाखल्ला हुन थाल्यो।
गणेश र निर्मलाले ‘घर आइज छोरा, तेरो कुरा बुझ्छौं, जे भन्यो त्यही मान्छौं’ भनेर रेडियो, टिभी सबतिर फुकाए। फेसबुकमा पनि थाहा दिए। गणेशले अस्ति उसको अगाडि आकाशलाई गिज्याएको अफिसकै मान्छेलाई पनि खबर गर्‍यो। धेरैलाई थाहा भए छोरा भेटिन्छ कि भन्ने आश थियो उसलाई।
अब ‘मान्छेले के भन्लान्’ भन्ने सबै डरलाई ‘छोरा कहाँ होला’ भन्ने डरले जितिसकेको थियो।
तर यसरी खोजेको तीन महिना भइसक्दा पनि आकाश भेटिएन। तारालाई त दाइ भेटिन्छ भन्ने आशै थिएन। उसलाई थाहा थियो, आकाश हराएको होइन, आफ्नो ठाउँ खोज्न गएको हो। त्यो ठाउँ जहाँ उसले आफ्नो खुसीको केही स्पष्टीकरण नदिई बाँच्न पाउँथ्यो। त्यो ठाउँ जहाँ उसले केटा, मर्द, मर्दको छोराभन्दा पहिले मान्छे मात्रै हुन पाउँथ्यो। ‘डान्सर’ मात्रै हुन पाउँथ्यो।
बेलुका केक काटिसकेपछि ताराकी मिल्ने साथी स्मृतीले भनी, ‘अब डान्स गरम् न एकछिन। आज अंकल-आन्टीलाई पनि नचाउने।’
ताराले ‘ठीक कुरा, बाबा उठ्नु न’ भन्दै हात समातेर गणेशलाई तान्न खोज्दै थिई, गणेशले एक्कासि हात झट्कार्‍यो। सबैजना अकमक्क परे। निर्मला भने अप्ठ्यारो मान्दै गीत बजाउन गई। ताराका साथीहरू नाच्न थाले। गणेश ‘एकछिनमा आउँछु’ भनेर कोठाबाट निस्कियो।
मै राम्री हुन, के गरौं भन्देऊ! आँखामा गाजल लाऊँ कि, ओठमा लाली लाऊँ…
तारा छक्क पर्दै झ्यालबाट हेरिरहेकी थिई। गणेश विस्तारै उठेर नाच्न थाल्यो। थुप्रोबेर एक्लै नाचिरह्यो। दुरूस्तै, आकाशजस्तै। -सेतोपाटीबाट